Interior Designer တစ်ယောက်ရဲ. အတွေ.အကြုံများ Register
Interior Designer တစ်ယောက်ရဲ. အတွေ.အကြုံများ If this is your first visit, be sure to
Thread: Interior Designer တစ်ယောက်ရဲ. အတွေ.အကြုံများ Thread Tools
10-05-2010 09:06 PM
Posts 832	Thanks 106
Thanked 522 Times in 269 Posts
Rep Power0Re: Interior Designer တစ်ယောက်ရဲ. အတွေ.အကြုံများ ဒီ လိုတော့ မရပါဘူး ကိုMTZO :angry: မြန်မာလို ရှင်းပြပါ... :haha:
တစ်ခြား အကြောင်းပြချက် ပေးဖို့ မစဉ်းစားပါနဲ့ :7:
မြန်မြန်လေး ဘာသာပြန်ပါ.. :2:
Let share our knowledge!
Reply With Quote The Following2Users Say Thank You to papagyi For This Useful Post:
Elvin, tinthanoo 04-23-2015 04:58 PM
Rep Power0ကျေးဇူးပြုပြီးသင်တန်းလိပ်စာလေးနဲ့အသေးစိတ်ကိုပြောပြပေးပါလား
Reply With Quote 04-23-2015 05:00 PM
Rep Power0Originally Posted by အပယ်ရတနာ
ဗိသုကာနဲ့ပတ်သတ်လို့...interior design coarse ကိုတက်လို့ရတယ်လို့ကြားပါတယ်....architect ဦးဆန်းဦးဆီမှာပါ...Interior diploma ၇မှာပါ...ခု ဆို ပထမအသုတ်စနေပါပြီ...တစ်နှစ်ကိုအယောက်20သာ လက်ခံပါတယ်...တစ်နှစ်လုံးအတွက်4သိန်းခွဲပါ...အတန်းထဲက သူငယ်ချင်းတွေပြောလို့သိတာပါ။ဒါပေမယ့်အဲဒီ interior design ကို ဗိသုကာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး..AGTI လက်မှတ်သို့ဘွဲ့ရမှတက်လို့ရပါတယ်...အပြင်ကလူဆိုရင်တော့...visual design ကိုအရင်တတ်ရပါတယ်...လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ကတော့..အဲဒီ visual design ကတစ်သိန်းခွဲပါ. ခုတော့ဘယ်လောက်လဲမသိဘူး... အဲဒီ သင်တန်းပြီးမှ interior design ကိုတတ်လို့ရမှာပါ...
Reply With Quote The Following User Says Thank You to ထက်ထက် For This Useful Post:
htinlin + Reply to Thread
By KPZ in forum Interior Design
Last Post: 01-26-2011, 03:17 PM
Surveyor တစ်ယောက်ရဲ့ အဇ္ဈတ အပိုင်းအစများ By ငမောင် in forum ကိုယ်ပိုင်စာစုများ
Last Post: 07-02-2010, 09:42 PM
Draftman တစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်
By KPZ in forum AutoCAD
Last Post: 02-24-2010, 08:11 PM